समाचार - गैर बुना: भविष्यको लागि कपडा!
शब्द ननव्वेन शब्दको अर्थ न त "बुनेको" वा "बुन्ने" हो, तर कपडा अझ धेरै छ। गैर बुना कपडा संरचना हो जुन सीधा फाइन्डरबाट उत्पादन गरीएको छ वा बन्धन वा अन्तर्लिंग वा दुबै द्वारा। योसँग संगठित ज्यामितीय संरचना छैन, बरु यो एक एकल फाइबर र अर्कोको बिचको सम्बन्धको परिणाम हो। ननवोभन्सको वास्तविक जरा स्पष्ट नहुन सक्छ तर "नौंवोभन कपडा" भन्ने शव्द १ 194 2२ मा बनाईएको थियो र संयुक्त राज्यमा उत्पादन गरिएको थियो।
गैर बुने कपडा २ मुख्य विधिहरुमा बनाइन्छ: ती या त हावामा राखिन्छ वा तिनीहरू बन्धनमा राखिएको हुन्छ। फेल्ट गैर बुना कपडा पातलो पानाहरू राखेर उत्पादन गरिन्छ, त्यसपछि तातो, नमी र दबाव सink्कुचन गर्न र फाइबरलाई बाक्लो matted कपडामा सress्कुचित गर्न को लागी लागू हुन्छ जुन कि रवल वा फ्राई हुँदैन। फेरी त्यहाँ there मुख्य विधिहरू छन् बन्डेड गैर-बुने कपडा उत्पादन गर्नका: ड्राई लेड, गीला लेड र डायरेक्ट स्पन। ड्राई लेड गैर बुने कपडा उत्पादन प्रक्रियामा, फाइबरको वेब ड्रममा राखिन्छ र तातो हावालाई फाइबरहरू सँगै गाँस्न इंजेक्ट गरिन्छ। Wet-Lided गैर बुने कपडा उत्पादन प्रक्रियामा, फाइबरको वेब नरम विलायकको साथ मिश्रित हुन्छ जसले एक गोंद-जस्तो पदार्थ निकाल्छ जुन फाइबरहरूलाई बन्धन गर्दछ र त्यसपछि वेब सुक्खा राखिन्छ। डायरेक्ट स्पन गैर बुने कपडा उत्पादन प्रक्रियामा, फाइबरहरू कन्वेयर बेल्टमा टाँसिएका हुन्छन् र ग्लोस फाइबरहरूमा छिर्दछन्, जुन बन्धनलाई थिचिन्छ। (थर्माप्लास्टिक फाइबरको मामलामा, गोंद आवश्यक पर्दैन।)
गैर बुना उत्पादहरू
जहाँ तपाईं बसिरहेको वा अहिले उभिनुभयो, चारै तिर हेर्नुहोस् र surly तपाईं कम्तिमा एक गैर बुना कपडा पाउनुहुनेछ। गैर बुने कपडाहरू मेडिकल, कपडा, मोटर वाहन, फिल्टरेशन, निर्माण, जियोटेक्स्टाइल र सुरक्षात्मक बजारको बजारमा फस्छन्। दिनदिनै गैर-बुनेका कपडाहरूको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ र ती बिना हाम्रो वर्तमान जीवन यति बुझ्न सकिदैन। सामान्यतया त्यहाँ नौंवौंन कपडाको २ प्रकार छन्: टिकाऊ र डिस्पोजल। लगभग %०% गैर बुनेका कपडाहरू टिकाऊ हुन्छन् र बाँकी %०% डिस्पोजल हुन्छन्।
गैर बुनेको उद्योगमा केहि नयाँ इनोभेसन:
गैर बुने हुए उद्योग जहिले पनि समयको लागि आविष्कारको साथ समृद्ध हुँदैछ र यसले व्यवसायलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ।
सर्फेसकिनस (ननवेभन्स इनोवेशन एण्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट-एनआईआरआई): यो एन्टिबैक्टेरियल डोर पुशिंग प्याडहरू र पुलिंग ह्याण्डलहरू हुन् जसले जम्मा कीटाणुहरू र जीवाणुहरूलाई मार्न मद्दत पुर्‍याउँछन् महत्त्वेपूर्ण सेकेन्डको भित्र, एक प्रयोगकर्ता र अर्को अर्को ढोकाबाट पार गर्दै। यसैले यसले प्रयोगकर्ताहरूमा जीवाणु र ब्याक्टेरियाको प्रसार रोक्न मद्दत गर्दछ।
रिकोफिल ((Reifenhäuser Reicofil GmbH & Co KG): यो प्रविधिको अत्यधिक उत्पादक, भरपर्दो र दक्ष लाइन प्रविधि प्रदान गर्दछ जसले कडा टुक्रालाई percent ० प्रतिशतले कम गर्दछ; १२०० मि / मिनेट सम्म आउटपुट बढ्छ; स्ट्रिमलाइन मर्मत समय; ऊर्जा खपत कम गर्दछ।
पुन: निर्माण ™ कम्पाउन्ड हर्निया प्याच (शंघाई पाइन र पावर बायोटेक): यो एक इलेक्ट्रो-स्पन न्यानो-स्केल प्याच हो जुन धेरै लागत-प्रभावकारी शोषक जैविक कलम हो र नयाँ कोषहरूको लागि विकास माध्यमको रूपमा सेवा गर्दछ, अन्ततः बायोडिग्रेडिंग; पोस्ट अपरेटिभ जटिलताको दर कम गर्ने।
विगत years० बर्षमा विकासको लगभग अटुट अवधि कायम गर्दै, ननव्वेन अन्य टेक्स्टाइल उत्पादनहरू भन्दा बढी नाफाको साथ विश्वव्यापी कपडा उद्योगको सूर्योदय क्षेत्र हुन सक्छ। गैर बुनेका कपडाको विश्वव्यापी बजार चीनको नेतृत्वमा बजार हो, यसको बजार हिस्सा around।% छ, पछि युरोप २ 25% को बजार शेयर सहित। यस उद्योगका अग्रणी खेलाडीहरू AVINTIV, फ्रायडनबर्ग, डुपन्ट र अहिलस्ट्रम हुन्, जहाँ AVINTIV सबैभन्दा ठूलो निर्माता हो, यसको उत्पादन बजार शेयर around% को साथ।
भर्खरको समयमा, सीओआईसी १ cases घटनाहरूको बृद्धि भएपछि स्वच्छता र गैर बुने कपडाले बनेको मेडिकल उत्पादनहरूको माग (जस्तै: सर्जिकल क्याप्स, सर्जिकल मास्क, पीपीई, मेडिकल एप्रन, जुत्ता कभर आदि) १० गुणासम्म बढेको छ। 30x बिभिन्न देशहरुमा
विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजार अनुसन्धान स्टोर "रिसर्च एण्ड मार्केट्स" को एक रिपोर्टका अनुसार, ग्लोबल ननवेवन कपडा बजार २०१ 2017 मा $ $.3.77 अर्ब डलर हो र २०२ 20 सम्ममा $। ..78 अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ, जुन पूर्वानुमान अवधिमा .3 ..3% को सीएजीआरमा बढेको छ। यो पनि मानिन्छ कि टिकाऊ गैर बुनेको बजार एक उच्च सीएजीआर दरको साथ बढ्नेछ।
किन गैर बुने?
ननवेभन्स अभिनव, रचनात्मक, बहुमुखी, उच्च प्रविधि, अनुकूलनीय, आवश्यक र डिकोजोजेबल हुन्। यस प्रकारको कपडा सीधै फाइबरबाट उत्पादन गरिन्छ। त्यसैले यार्न तयारी चरणहरूको आवश्यक छैन। निर्माण प्रक्रिया छोटो र सजिलो छ। जहाँ ,,००,००० मिटर बुने कपडा उत्पादन गर्न सकिन्छ, यसले6महिना लिन सक्दछ (धागा तयार गर्न २ महिना, lo० वानमा बुन्न for महिना, परिष्करण र निरीक्षणको लागि १ महिना), समान मात्राको उत्पादन गर्न २ महिना मात्र लाग्छ गैर बुने कपडा। तसर्थ, जहाँ बुनेको कपडाको उत्पादन दर १ मिनेट / मिनेट छ र बुने कपडाको उत्पादन दर २ मिटर / मिनेट हो, तर गैर बुनेका कपडाको उत्पादन दर १०० मिटर / मिनेट हो। यसबाहेक उत्पादन लागत कम छ। यस बाहेक, गैर बुना कपडा विशिष्ट गुणहरू जस्तै उच्च शक्ति, सास फेस, शोषकता, टिकाउपन, हल्का तौल, रिटार्ड फ्लेम, डिस्पोजेबिलीटी आदि प्रदर्शन गर्दछ। यी सबै अपूर्व सुविधाहरूको कारण, कपडा क्षेत्र गैर बुनेका कपडाहरूतर्फ बढिरहेको छ।
गैर बुने कपडालाई अक्सर कपडा उद्योगको भविष्य भनिन्छ किनकि उनीहरूको विश्वव्यापी माग र बहुमुखी प्रतिभा केवल उच्च र उच्च हुँदै गइरहेको छ।